FAALLO: ONLF waxay qortay Taariikh cusub oo Halgan hubeysan ah,Admiral guuleystay, Maxaase kuduugan? – Puntlandtimes
October 21, 2018 W LAASCAANO
JIGJIGA(P-TIMES) – Jabhada Xoreynta gobalka Ogaadeeniya ee loo garan og yahay ONLF ama JWXO waxay halgan ka badan 30 sanno oo Hubeysan sameeyeyna naf, maal iyo deegaan-ba, kula jirtay ciidamada ugu tiradda iyo tayada badnaa ee gobalka Geeska Africa, waxayna dagaalkeeda ka bilowday deegaano kuyaala gudaha Soomaali Galbeed, wax yar markii ay Xukuumaddii Kacaanka Soomaaliya ya Xukuumadii Migiste la gashay heshiis ay kaga tanaasushay xoreynta gobaladaas.
ONLF waxay dagaalkii ugu cuslaa la kulantay wixii ka dambeeyey 1994-tii, xiligaas oo uu Ra`iisulwasaarihii Itoobiya Meles Zanewi lasoo baxay ujeedooyin qarsoonaa oo ka dhan ah gobalka Soomaalida.
Dagaalo faraha looga gubtay ayaa dhexmaray labada dhinac, Itoobiya way ku guuldareystay in ay cududa ciidan ee Jabhadaas wiiqdo marar badan, ilaa lasoo gaaray sannadkii 2008-dii xiligaas oo ay Itoobiya kumanaan katirsan ciidamadeeda Milateriga galisay gobalada dhexe iyo gudaha Soomaaliya oo ay Jabhadu kasoo duuli jirtay.
Gabaad wanaagsan oo walaalnimo ayey ONLF ka heshay dalka Eritrea oo uusan xariir wanaagsan kala dhaxeyn Addis Ababa, waxayna mudo dheer halgankeeda ka waday dalkaas oo ay taageero dhinacyo badan leh ka heli jirtay.
Raysalwasaarihii hore ee Itoobiya Meles Zanewi oo mar la weydiiyey ONLF iyo sidda uu dagaalkeeda yahay wuxuu sheegay in ay yihiin dad la yaab leh, ficiladooda ayuu kusifeeyey maro-kudhag ay adag tahay in laga guuleysto, wallow xiligaas ay ku jiraan marxalad adag.
Ma jirin taageero ay ka heleen maamulada Soomaalida, iskadaa taageero ay ka helaana iyaga ayaa u dhiibayay Itoobiya, taas oo ay taageero uga raadinayaan maamulka Addis Ababa, waana dhacdooyinkii ugu xanuunka badnaa ee Jabhadda soo mara.
Mid kamid ah ragga ugu sareeya Jabhadda oo aan la kulmay, aana kala sheekaystay marxaladihii lasoo maray, wuxuu ii sheegay in uusan murug ka qabin Askarta uga dhimatay furimaha dagaalka iyo Saraakiishoodii qaaliga ahaa, balse mahadhada Taariikheed ee aysan waligood ilaaweyn tahay sidii ay dhabar jabinta ugu sameeyeen walaalahooda kusugnaa gobalada xorta ah.
Jabhadda Tigree-ga ayaa si toos ah oo aan qarsoodi laheyn u maamuleysay Hogaamiyaasha Soomaalida, waxaana meelaha ugu badan ee laga soo dhiibay Saraakiil iyo taageerayaasha ONLF kamid ahaa, Galmudug, Puntland, Somaliland & Koonfurta kale ee dalka, waxaana xiliyadaas oo dhan ONLF aysan ku dhiiran in ay Soomaalida gaarsiiso gacanteeda, taas oo aan weydiiyey Sarkaal sare oo katirsanaa Jabhadaas wuxuu sheegay in Hoggaamiyahoodu ku amray in aan marnaba Soomaalida xorta ah qoriga lagu jeedin.
Sarkaalkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa inta la og yahay Cabdikariim Sh Muuse Qalbi Dhagax oo ay dawladdii sharciga ahayd ee Soomaaliya ku wareejisay Itoobiya oo dharaaro badan ay si xun ugu dagaalameen furimaha dagaalka, sheegan jirtayna dhimashadiisa, taasi waxay noqotay mid aan marnaba ka go’in Qaluubta Shacabka Soomaaliyeed weyna ka dhiidhiyeen.
Hoggaamiyaha Jabhada waa Admiral Maxamed Cumar Cismaan, wuxuu dhashay qiyaas ahaan 1940-tii kuna dhashay dhulka Soomaali Galbeed, Kuliyadihiisa dagaalka ayuu kaga soo baxay Masar, wuxuu horey u soo noqday Taliyihii ciidamada Badda ee Soomaaliya xiligii Kacaanka, laakiin wuxuu go’aansaday in uu difaaco dadkiisa iyo dalkiisa oo aan rabitaankooda ku hoos tagin Itoobiya, markii ay dawladdii Kacaanku heshiis la gashay Xukuumaddii Addis Ababa.
32 Sanno ayuu ciidamada Soomaaliya kamid ahaa, haddana taasi kama reebin in uu ka baaqsado Halgan dheer oo uu rumeysanaa in uu labo mid noqon doono dhimashadiisa ama guushiisa, taas oo uu maanta hayo mira-dhalkeeda, kuna sii jeeda dalkiisii oo si weyn loogu soo dhaweynayo.
Admiralka marnaba kama laba-labeyn Halganka uu ku jiray, wuxuu diiradda saarayey in uu maalin arki doona Guusha, khataro u soo galay ka sokow, maanta wuxuu goobjoog u noqday Dharaarihii farxadda iyo in uu arko Halgankii uu Hogaaminayey oo miro dhalay.
Admiralka marar badan ayaa loo maleegay weeraro qorsheysan oo ay qeyb ka qaateen Sirdoonka ugu sareeya ee dunida, balse wuu ka badbaaday ayaamo badan ayaa lagu weeraray gudaha gobalka Soomaali Galbeed, wuu si dhuumasho ah ku gali jiray, isagoo diyaarad waliba ka soo raaca UK oo uu daganaa, furimaha horena isku arkayeen cadowga oo uu xiligaas dagaalka qeyb ka qaadanayay.
Ka sokow in ay ONLF maanta heshiis la gashay Itoobiya, haddana arrimaha xusida mudan waxaa kamid ah Isbedelada waa weyn ee kudhuftay gobalkii Geeska Africa, TPLF oo ay cadowga koowaad isku hayeen ONLF maanta wey ka baxeen Saaxadda Siyaasadda Itoobiya.
Imtixaan adag ayay soo martay ONLF, marar badan waxay diiday heshiisyo in ay saxiixdo, mar kasta qodobka dooda ugu badan keenayay wuxuu ahaa mid ku saabsan madax banaanida iyo Afti ka qaadida shacabka Soomaali Galbeed oo aysan marnaba dooneyn kooxdii TPLF ee Tireega dalka Itoobiya oo maamulayey.
Saaxiibo badan oo kamid ahaa asaasayaashii Ururkan ayaa ku geeriyooday furimaha dagaalka, qaarkood wey u adkeysan waayeen xadgudubyadii lagu sameeyey, waxayna go`aaansadeen in aysan maanta goobjooga ka noqon mira-dhalka Halganka, in ka badan 20Kun oo iskugu jira qeybaha bulshada oo Haween iyo Caruur ku jiraan ayaa la dilay, qaarkoodna la gubay, mana jiraan cid xaquuqdooda u dooday ama ka hadashay.
Mid kamid ah xubnaha ONLF oo kusugnaa markaan la hadlayay gudaha Madaxtooyada Asmara oo heshiiska lagu saxiixay waxaan ka dareemayay qiirada haysa in uu maanta goobjoog ka noqdo munaasabada Saxiixa heshiiska iyo in la gaaray hadafkii ay mudo dheer cidlada iyo dhibka u soo mareen.
Xasuustayda 2008-dii, maalmo ay dagaalo adag ka dhaceen deegaanada Soomaali Galbeed dhexmarayna ONLF iyo Itoobiya waxaa jiray dhaawacyadooda in loo diiday qaar kamid ah Isbitaalada xaduuda kuyaala, Xiligaas anoo wariye ah ayaan xogtaas ogaaday deetana Gudoomiyihii degmadaas wuu diiday in uu ka hadlo, ilaa ay xariiro kala duwan igu soo dhaceen.
Shaki maleh in halgan kasta oo lagalaa labo wado mid uun qaadayo guul ama guuldarro, haddana mar kale ONLF ama JWXO waxaa u bilowday halgan kale oo dheer, watana halisyo ka waa weyn kuwii horey u jiray, waxaana la eegayaa sidda Admiral Maxamed Cumar Cismaan uga gudbiyo Bulshadiisa dharaaraha Imtixaan ee sugaya.
W/Qoray: Farah Abdulkadir Geylan, oo an falanqeeye si dhaw ula socday Isbedelada Itoobiya, mudo dheerna isha ku hayay dagaaladii labada dhinac ka dhex socday.